Forced penetration: Nwaanyị manye nwoke ka ya na ya nwee mmekọrịta, ọ bụ mwakpo n'ike? - BBC News Ìgbò
Forced penetration: Nwaanyị manye nwoke ka ya na ya nwee mmekọrịta, ọ bụ mwakpo n'ike?
25 Julaị 2019
Nkenke aha onyonyo O kwesịrị ka a kpọọ ya mwakpo n'ike ma nwaanyị manye nwoke ka ha dịnaa?
Nwoke manye nwaanyị ka ya na ya dinaa, ọ bụrụ mwakpo n'ike. O kwesịrị ka a kpọọ ya mwakpo n'ike ma nwaanyị manye nwoke ka ha dịnaa?
Iwu mba Ingland na Wels sị na ọ bụghị mwakpo n'ike mana nnyocha e mere ọ hụrụ kwuru na o kwesịrị ịkpọ ya mwakpo n'ike.
Akụkọ ga-agbarụ obi ụfọdụ ndị na-agụ ya
Ọkammụta Siobhan Weare nke mahadum, 'Lancaster University Law School' mere nchọpụta banyere ihe nsori a manyere mmadụ amanye were mee na mba Briten bido na afọ 2016 rue 2017 ma nweta ozi n'aka ụmụnwoke karịrị narị abụọ site na intanet.
Nchọpụta ọhụrụ o mere nke e wepụtara n'izụụka a gbadoro ụkwụ na mkparịtaụka ihu na ihu e mere ụmụnwoke dị iri atọ bido n'ọnwa Mee afọ 2018 rue Julaị 2019.
Nchọpụta ahụ lebanyere anya kpọmkwem n'ọnọdụ ihe nsori a manyere mmadụ amanye, ihe ọ na-ebute nakwa etu iwu obodo si eso ya.
A kpọghị aha ndị sonyere na nchọpụta ahụ mana m ga-akpọ otu n'ime ha John.
John kwuru na njirimara mbụ ya hụrụ bụ na enyi ya nwaanyị bidoro merụwa onwe ya ahụ.
Nke kachasị yi egwu bụ nke mere e jiri gbara ọsọ buga ya ụlọọgwụ. Ha abụọ mechara nwee mkparịtaụka ihe nwere ike ịbute ụdị agwa ahụ.
Ka ọnwa isii gachara, kama ịmerụ onwe ya ahụ, anya ya bịara dị n'ahụ John.
John sị, "Anọ m ala n'obi ụlọ anyị, o si n'usekwu pụta, kụọ m ọkpọ chara ọkụ n'imi, chịwa ọchị, gbafere."
"Ịkpasa m ike bidoro mewa kwa daa."
Ọ gara ụlọọgwụ hụ dọkịta, nwetakwa ndụmọdụ nleta, a gwa ya hụ ọkachamara ahụike akọ na uche( psychologist) mana ọ gaghị.
"Ọ lata ọrụ, ya asị na ya chọrọ ndina."
"O bido kpawa ike, o rutere oge m bido na-atụ egwu ya ịlọta ọrụ."
Obi anaghị aka anyị ịkọ ihe anyị na ahụ n'ihi ihere. Ị kọọ, ndị mmadụ anaghị ekwenye maka na anyị bụ nwoke.
Nchọpụta banyere idina n'ike, A ga-awakpoli nwoke?
Otu ụbọchị John tetera ụra were hụ na enyị ya nwaanyị ji ịga kụchie aka nri ya n'akwa.
O bidoro were isii igwe na-eme ka egwu daa ụda na-akụ ya n'isi, ma were eriri wọghịrịwọghịrị(nylon rope) kee aka ekpe ya, ma manye ya ka ya na ya dịnaa.
Egwu na ahụ ụfụ ekweghị John mee ihe ọ gwara ya. Ya mere, nke nwaanyị kụrụ ya ihe ma hapụ ya n'ịga ihe ruru ọkara awa tupu ọ lọghachi bịa tọghapụ ya.
Ka nke mechara, o kweghị ka anyị kpaa maka ihe merenụ.
O teghị aka, ya adị ime, ịkpa ike kwụsịlata. Mana ọnwa ole na ole ọ mụchara nwa, John tetara ụra were hụ na e ji ịga kedo ya n'elu akwa.
Ọ kọwara na enyị ya nwaanyị gbara ya ọgwụ 'Viagra' ma kechie ya ọnụ.
Nkenke aha onyonyo Nwoke na-achọ ịtọpụ nwoke akwa ọ wa
"O nweghị ihe m nwenwuru ike ime."
"E mechara m gaa n'ụlọ ebe a na-asa ahụ nọọ ala. Amaghị awa ole m nọrọ ebe ahụ tupu m gbadaa ala.
"Ihe mbụ ọ jụụ m bụ, "Ginị ka a ga-eri n'abalị?'"
Mgbe John gbalịlị ị kọrọ ndị mmadụ ihe ọ na-agabiga, o nweghị onye kwenyere.
"A na-ajụ m, gịnị mere na m ahapụghị ụlọ ahụ."
N'ezie, ọ bụ ụlọ m nke m zụtara ụmụ anyị. A bịakwa n'okwu ego, atọkwara m atọ n'ije a."
"Ka ọ dị ugbua, ndị mmadụ anaghị ekweta n'ihi na ha na-asị, " gịnị mere na o tie gị , ị naghị etigwara?'"
Mana nke ahụ ka dị mfe n'ọnụ karịa n'omume.
"A sị na m ma gbafuo ọsọ ọsọ."
Ụmụ nwoke ndị ọzọ Dr Weare gbara ajụjụọnụ gabigakwara ụfọdụ n'ime ụdị ihe John gabigara.
Otu n'ime ọkammụta ahụ chọpụtara bụ na ndị na-amanye ndịna ndị a bụkarị enyị nwaanyị maọbụ onye buụbu enyị nwaanyị. (Nchọpụta ya lebara anya naanị na mmekọrịta nwoke na nwaanyị),
Ndị a gbara ajụjụ kwụkwara na ndị mmadụ anaghị ekwenye na ha kọrọ ha ihe mere ha.
Ontu nwoke kwuru na onye uweojii siri ya: "Ọ tọrọ gị ụtọ, ọ bụghị otu ahụ, ị kara ewetarala anyị mgbesa ọsọ ọsọ."
Onye ọzọ kwụkwara,"Obi anaghị aka anyị ịkọ ihe anyị na ahụ n'ihi ihere. Ị kọrọ, ndị mmadụ anaghị ekwenye maka na anyị bụ nwoke. A ga-awakpoli nwoke?"
Ihe ndị ọzọ Weare chọpụtara bụ:
Ihere na-eme ụmụnwoke ịgba n'anwụ na a wakporo ha- Ha nwere ike ikpesa na e tiri ha ihe ma ha agaghị ekwu ma e dịna ha n'ike
Ụdị mwakpo nwere ike imetuta ahụike ụbụrụ ha dịka ha nwere ike nwewa nsogbu echiche ịkwụ ụdọ maọbụ nsogbu metụtara mekọrịta nwoke na nwaanyị (sexual dysfunction)
Ụfọdụ ụmụ nwoke kwuru na e mekpala ha ahụ ugboro, ugboro- ụfọdụ, ma nwoke, ma nwaanyị metọrọ ha oge ha dị na nwata
Ọtụtụ n'ime ha obi adịghị ha mma ebe ọtụtụ n'ime ha ejighị anya ọma ele ndị uweojii, Iwu Obodo nakwa usoro inweta ikpe mkwụmọtọ
Otu akụkọ ifo nke nchọpụta gosiri na ọbụghị eziokwu bụ na ụmụnwoke kara aka, na enweghị ike idina ha n'ike n'ihi na nwoke ka nwaanyị ike ọkpụkpụ aka.
Ọzọ bụ na ụmụnwoke niile na-ahụta ohere ọbụla idina nwaanyị dịka ihe ọma.
Amụ ụmụnwoke nwere ike ikeli ọ masị ya bụrụ na egwu maọbụ iwe ji ha.
Siobhan Weare , Nwaanyị manye nwoke ka ya na ya nwee mmekọrịta, ọ bụ mwakpo n'ike?
Akụkọ ifo ọzọ bụ na ọ bụrụ na amụ nwoke kelie, ọ pụtara na ọ chọrọ ndina.
N'ezie, Weare sị, "Amụ ikeli bụ ịza oku a kpọrọ ọnarachi".
"Amụ ụmụnwoke nwere ike ikeli ọ masị ya bụrụ na egwu maọbụ iwe ji ha."
"E nwekara nchọpụta gosiri na nwaanyị a na-awakpo n'ike nwekwara ike inwe 'orgasm' n'ihi na ahụ ha na-aza oku ọnatarachi. Ya bụ ihe na eme ma nwoke, ma nwaanyị a wakporo n'ike nke a naghị akpa nkata ya ka o kwesịrị mana ihe akaebe gosiri na ọ na-eme."
Ụfọdụ ndị sonyere na nchọpụta Weare mere kwuru na e dinara ha n'ike oge ha ṅụrụ mmanya maọbụ aṅwụrụ nke na enweghị ike igbochi ihe na-eme.
Otu n'ime ndị agbara ajụjụ na nchọpụta ahụ kọrọ etu ya na nwaanyị siri lawa n'ụlọ ka ha gachara ụlọ oriri na nkwarị n'abalị ga rie , ṅụọ,. E ruter , ọ maghịzịkwa onwe ya mana ọ na-eche na a gbara ya ọgwụ ike ma dịna ya n'ike.
Nwoke ọzọ kwukwara na amanyere ya ndina oge ọ bụ nwaankwụkwọ mgbe ọ na arụ ọrụ oke e mechiri akwụkwọ. Otu nwaanyị ya na ya na-arụ ọrụ nwetara akwụkwọozi ịhụnaanya o degara nwoke ibe ya were gwa ya na iwu bụ na ha abụọ ga-edina , ọbụghị otu a, ọkọọ ndị mmadụ na ya na nwoke ibe ya na-eme enyi. O mere ihe nwatanwaanyị ahụ gwara ya n'ihi na ndị ezinaụlọ ya na ndị ọrụ ha amaghị na nwoke bụ ihe na-amasị ya.
Weare kọwara na mirikiti ụmụnwoke sonyere na nchọpụta ahụ hụtara mmanye amanyere ha dịna dịka 'mwakpo n'ike,' ebe ike gwụrụla ụfọdụ n'ime na Iwu Ingland anaghị ahụ ya ka mwakpo.
Ọ na-ewutekwa ọtụtụ ha na mba Briten anaghị ahụ ya ka mwakpo n'ike.
Otu onye so na ndị sonyere na nchọpụta ahụ sịrị: "Ikwu na enyi gị nwaanyị ochie ṅụrụ mmanya, manye m ndina dịka nrọ ọtụtụ ụmụnwoke na-arọ."
N'otu akwụkwọ Weare dere ọ kpọrọ "O, ị bụ nwoke, kedụ ka nwaanyị ga-esi wakpo gị n'ike, nke a abụghị ya ma ọlị" - ọ rụtụrụ aka na mba Amerịka, ana ụ ndịna n'ike dịka mmekọrịta nke eneghị nkwekọrịta, na steeti Victoria dị na mba Australia, e nwere iwu megidere ndina n'ike site na "ịmanye nwoke ka ọ banye gị ime ahụ."
Otu na ihe nchọpụta mere bụ ịrịọ ka elebanye iwu gbara mwakpo n'ike anya tọrọ atọ.
Say no to rape: Ihe nwaanyị ga-eme iji nweta ikpe ziri ezi ma a kwaso ya iko n'ike
28 Juun 2019
Busola Dakolo: "Etinyeghi m aka n'akwụkwọ isepu aka n'ikpe mụ na Fatoyinbo"
7 Ọgọọst 2019
Ikpe amaala Bill Cosby n'ebubo mwakpo nwaanyị
26 Eprel 2018
Liverpool agwọọla Arsenal ka abacha e tinyere ose Nsukka